भान्सामा औषधी – टमाटरको नालीबेली | PaniPhoto
भान्सामा औषधी – टमाटरको नालीबेली
पानीफोटो / October 1, 2012 /4Comments
तस्विर : गुगल इमेज
स्वास्थ्य मानव जीवनका लागि सबै भन्दा ठुलो सम्पती हो । आफुमा स्वस्थ्य भइञ्जेल ख्याल नगरेर बिग्रिएको स्वास्थ्य सुधार्न मानिस सबै कुरा गुमाउँन पनि तयार बन्छ । तर पनि एकपटक बिग्रिसकेको स्वास्थ्य पुर्ववत अवश्थामा आउँने सम्भावना कमै रहन्छ । यदि दैनिक जीवनमा थोरै मात्र ध्यान दिन सके स्वास्थ्य निकै सबल बन्न सक्छ । यसका लागि त्यती धेरै समय तथा खर्च पनि गरिरहनु पर्दैन । हाम्रै भान्सा तथा घरआँगनमा भएका वस्तुहरुको प्रयोगबाट पनि स्वास्थ्य राम्रो बनाउँन सकिन्छ । यसको राम्रो उदाहरण हो, टमाटरको प्रयोग । टमाटर मानव शरिरका लागि कति आवश्यक छ, जानकार बनौं ।
टमाटर तथा टमाटरजन्य पदार्थहरु मानिसमा फलफुलबाट आपुर्ति हुने पदार्थ प्राप्त गर्न विकल्पका रुपमा काम गर्न सक्छ । जसले मानिसहरुमा सन्तुलित खानाको आपुर्तिमा त सहयोग गर्छ नै यसका कारण मानव स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्छ । टमाटर हुने पौष्टिक तत्वहरुको बारेमा तल तस्विरमा हेर्नुहोस्
स्रोत : whfoods
तपाईलाई भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी तथा अन्य खानेकुराको बारेमा दिएको जानकारी कस्तो लाग्यो ? अरु कस्ता किसिमका जानकारीहरु दिँदा राम्रो हुन्छ ? कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् ।
Tags: औषधी, टमाटरको, नालीबेली, भान्सामा / Posted in: स्वास्थ्य चर्चा
khumananda paudel says:
October 1, 2012 at 1:01 pm / Reply
tamatar ta nikai po phaidao raichha… ahile ta bhau pani ghateko chha…Samaimai bichar puryaunu hai sabaile….
October 1, 2012 at 1:03 pm / Reply
यो बैगुनमा चै के गुन होला । एक पल्ट जानकारी पाइन्थ्यो कि ।
मीना पाण्डे says:
October 1, 2012 at 1:36 pm / Reply
टमाटर त औषधी नभए पनि खाईन्छ । औषधी भएर अनि सजिलै पाइए पनि नखाईने हेला गरेको फलफुलको बारेमा लेख्नु न ।
raj kumar dhaugoda says:
October 1, 2012 at 7:20 pm / Reply
टमाटर मा anatabine भन्ने तत्वो हुनछ र त्येसैले नै रोग निको पार्न मद्दत गर्छ ।